🥇 ▷ Tilmaamaha Dooxada Vineyard iyo Trick ✅
Tilmaamaha Dooxada Vineyard iyo Trick
Kusoo dhawow tilmaamadeena iyo tabaha Vineyard Valley, ciyaarta iskuxirka 3 iyo halxiraalayaasha Jam City ee Android iyo mobiles-ka waxaa ka buuxa awood-koronto iyo combos, waana inaad heshaa qadaadiic, nolosha iyo qodobo sharaf leh si loo wanaajiyo muuqaalkaaga.
Tilmaanta iyo Dooxada Vineyard Dooxada – Ups Power
Sida dhamaan Conecta 3 waxaad kaheli doontaa koronto adoo isku xiraya aasaaska aasaaska:
Dhalada Rocket: Markaad isku xidho 5 midab oo isku mid ah astaamaha waxay noqon doonaan dhalooyin. Ka dib guji midkastoo ka mid ah si aad u abuurto gantaal dhalada ah, oo mar labaad u riix si aad u nadiifiso saf ama sadar (waxay kuxirantahay jihada toosan ama jihada toosan).
Barrel bamka: Markaad isku xidho 7 midab oo isku mid ah astaamaheeda waxay noqon doonaan gogol. Ka dib guji midkastoo ka mid ah si aad u abuurto matoorka foosto, oo mar labaad riix si aad u nadiifiso qaybaha ku xeeran
Qaansoroobaad: Markaad isku xidho 9 midab oo isku mid ah calaamadahaagu way isbadali doonaan. Kadib guji midkasta si aad u abuurto qaansoroobaad, oo mar labaad riix si aad u nadiifiso midabkaas oo dhan
Xaaladaha oo dhan markaad abuurto korantada, dooro halka aad ka abuuri karto, waa meesha aad go’aansato inaad riixdo.
Tilmaamaha iyo Tabaha Vineyard Valley – Combos
2 Dhalada Roodhka: safka iskutallaabta iyo tiirka nadiifi
Dhalada Roodhka + Bamka foosto: 3 saf iyo sadarro
2 Bamka Barrel: Shucaaca kore wuu ka ballaaran yahay
Dhalada Roodhka + Rainbow: dhalooyin badan oo gantaallo ah ayaa lagu faafiyaa khariiddada, iyagoo nadiifinaya dhowr saf iyo tiirar
Bambada Barrel + Rainbow: dhowr bambo oo foosto ayaa ku faafay khariidadda, oo sababa dhowr qarax oo isku mar la isku adeegsado
2 Rainbow: nadiifi heerka oo dhan
Tilmaamaha iyo Trick Vineyard Valley – Qalabka
Qaadada: Ka saar tab, riix qaadada ka dibna riix tab aad rabto inaad ka saarto
Iska yaree Pizza: Ka saar isku xigxiga, riix pizza gooyaha ka dibna riix safka aad rabto inaad tirtirto
Spatula: Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka saarto tiirka, riix spatula ka dibna riix khaanadda aad rabto inaad ka saarto
Whisk: Ka saar boodhka, riix whisk ka dibna riix tab aad rabto inaad ka saarto
Qadaadiicda waxaad ku beddeli kartaa alaabta guriga runtiina waa in lagaa doonaayo tiro aad u badan. Laakiin waxaa jira habab badan oo waxbadan lagu helo:
Dhaqdhaqaaqa bidix: dhaqdhaqaaq kasta oo soo hadha wuxuu noqon doonaa awood koronto iyo qadaadiic badan oo aad kasbato dhamaadka.
Is-diiwaangelinta: waxaa jira abaalmarin keliya oo ah is-diiwaangelinta 5,000 oo qadaadiic ah
Qodobbada sharafta leh: Buuxi mitirka sharafta si aad u hesho quwadaha, nolosha iyo qadaadiicda. Si aad u hesho qodobbadan waa inaad isticmaashaa xiddigo marka aad ku beddelato walxaha. Sameynta sidaas ayaa qaaliya qadaadiicda, laakiin inta ay ku kacayso, dhibco dhibco badan leh
Cutubyada oo dhammaystiran: Abaalmarinnada sidaas la yeelo waa qadaadiic, qalab ama waa-xoojin
Saaxiibbada: U oggolow inay tijaabiyaan suxuuntaada si ay u kasbadaan dhibco sharaf iyo qadaadiic, waxaad u baahan doontaa xiddigo, kuwaas oo laga soo helay heerarka halxiraalaha
Nolosha Nolosha – Ku biir naadi
Markii aad gaarto heerka 20 aad waad ku biiri kartaa naadi